Nagarik News - कस्ता छन् नेपाल भित्रिएका नयाँ सामसङ स्मार्टफोन?
होमपेज / प्रविधि / कस्ता छन् नेपाल भित्रिएका नयाँ सामसङ स्मार्टफोन?
कस्ता छन् नेपाल भित्रिएका नयाँ सामसङ स्मार्टफोन?	01 Aug 2013 | 14:20pm बिहीबार १७ श्रावण, २०७०
नेपालमा मोबाइलको बजार हिस्सा बढाउँदै लगेको सामसङले थप ३ नयाँ ग्यालेक्सी सिरिजको स्मार्टफोन ल्याएको छ। सामसङको ग्यालेक्सी मेगा, ग्यालेक्सी कोर र ग्यालेक्सी पकेट नियो नामका तीन स्मार्टफोन हालै बजारमा ल्याइएका हुन्।
५.८ इन्चको मेगामा १.५ जिबी र्याम र १.४ गिगाहर्ज डुअल कोर प्रोसेसर छ। ८ जिबी आन्तरिक मेमोरी रहेको मोबाइलमा ६४ जिबी थप मेमोरी राख्न सकिन्छ। यसमा सबैभन्दा नयाँ ४.२.२ जेली विन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम छ। यसको बजार मूल्य ४४ हजार तोकिएको नेपालका लागि सामसङको अधिकृत बिक्रेता इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसले जनाएको छ।डुअल सिमको सुविधा रहेको कोरको डिप्ले ४.३ इन्चको छ १ जिबी र्‍याम र १.२ गिगाहर्ज डुअल कोर प्रोसेसर रहेको यसमा पनि ८ जिबी आन्तरिक मेमोरी र ६४ जिबी मेमोरी सर्पाेट गर्ने क्षमता छ। यसमा एन्ड्रोइडको ४.१ अपरेटिङ सिस्टम छ । यसको बजार मूल्य २८ हजार ५ सय तोकिएको छ। डुअल सिम नै भएको पकेट नियोमा ५१२ एबीको र्याम र ४ जिबीको आन्तरिक मेमोरी छ। यसले ३२ जिबीको मेमोरी सपोर्ट गर्छ । वाइफाई र जिपिएस सुविधा रहेको यो फोनमा एन्ड्रोइडको ४.१.२ अपरेटिङ सिस्टम छ । यसको मूल्य १२ हजार ३ सय पर्छ।नेपाली बजारमा सामसङका स्मार्टफोन निकै लोकप्रिय रहेको भन्दै कम्पनीले नयाँ मोडलले पनि चाँडै नै ग्राहकको मन जित्ने कम्पनीले जनाएको छ। Tweet नागरिकLatest from